RIP. LUNG A FAKTUK EE, KAN RAM CIA AH RALHRANG NIH AN KAH THAH – The Chinlung Post
Tutan thawngpang theih cu lung afak hringhran ko. Kan Chinram cia ah ralhrang kawlralkap hna nih kan Chinmi nunnak an lak mi hi cu lung afak hringhrang ko. Kan Chinram Tedim ah ralhrang kawlralkap nih tlangval no kum 20 te lawngasi rihmi cu meithal in an kah thah. Ralhrang kawlralkap nih an kahthah mi hi Felix Thang Muan Lianasi. Atanglei bangin thawngthanhnak an tuah.
တီးတိန်မြို့တွင် ညကင်းစောင့်ရန်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားရောက်တဲ့ လူငယ်တစ်ဦး ပစ်သတ်ခံရ. ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့ တွင် ညကင်းစောင့်ရန်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားရောက်တဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် Tg. Felix Thang Muan Lian ပစ်သတ်ခံရကြောင်းသိရသည်။ Tg. Felix Thang Muan Lian သည် ဧပြီ ၂၇ ရက်ညက စ​ကောလမ်းရပ်ကွက်ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ညကင်းစောင့်ရန်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားရောက်နေစဥ် သေနက်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရသဖြင့် သေဆုံးသွား​ပါတယ်။
အ​လောင်းကို တီးတိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံတွင် ထားရှိပြီး ​နေအိမ်သို့ သယ်​ဆောင်ခွင့်မ​ပေး​သေး​ကြောင်း သိရသည်။ မနေ့ည တီးတိန်မြို့ တွင် တစ်နာရီခြား ဗုံးပေါက်ကွဲသံ နှစ်ချက်လည်း ကြားခဲ့ရကြောင်း တီးတိန်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ Credit: The Chin Journal